Imaaraadka oo soo tarxiiley Ardey Somaliyed oo ka qeyb galayey Tartanka Quraanka Bisha Ramadaank
Imaaraadaka ayaa la sheegay in Bilawdey in Quraan Aqriskii Bisha Soonka ay qaban jireen ay Siyaasad galiyeen ka dib markii ay soo taxiileen Wiil soomaaliyeed oo ka qeybgalayey Tartankaasi Xalay.
Ismaaciil Cumarar Madar ayaa cadeeyey in xalay laga joojiyey Tartan quraan aqris ah oo uu uga qeybgalayey Dalka Imaaraadka carab ka dibna loo qabtey in mudo kooban uu dalka uga baxo sidaasna uu u sheegay Wasiirka Diinta ee Dalkaasi.
Wiilka Ardeyga ah ayaa sheegay in xalay Saladii taraawiixda uu wax ku tijiyey Masjid ku yaal Magaalada Ajmaan ee dalka Imaaradka salaadas ka dibna taleefoonka looga yeeray Hoteel ka dib loona sheegay in uu dalkiisa ku aado mudo 30 daqiiqo gudahood ah.
Waxaana uu sheegay in arintaan ay tahey mid siyaasad laga dhigey Quraan Aqriskii lagu tartamayey oo uu xitaa soo gudbay wareegii hore uuna sugayey midka xiga.
Ismaaciil Cumarar Madar ayaa ALLAAHA uga mahad celiyey wixii ku dhacey ee ka qabsadey Dalkaasi Isutaga Imaaraadka Carabta ee uusan fileyn in ay ugu dhacaan siyaasad soo kala dhexgashey Carabta Dhexdeeda oo saameysey Quraankii ALLAE .